Mikasika ny - nPerf.com
Ahoana ny fomba hanohanana tetikasa nPerf?
Politika momba ny tsiambaratelo
Ahoana no hividianana angona nPerf?
andrana nPerf - Fepetra ankapobeny
Momba ny nPerf, momba anay
nPerf dia manampy anao mamatra ny ahatsara ny connection Internet nao. Misy ny test bitrate, fa na matanjaka aza izany, dia tsy ampy ahamarana ny kalitaon'ny connection Internet. Izay no nahatonga anay nanangana fomba vaovao ahafahana mamatra ny kalitaon'ny connection Internet ao anatin'ny segondra vitsy, amin'ny alalan'ny fomba vaovao mitovy amin'ny fataonao efa mi-surf amin'ny Internet.
Tarehimarika miteny indrindra
nPerf dia manangona fitsapana an-tapitrisany maro sy fepetra fandrakofana tambajotra finday miliara isan-taona. Ny tamba-jotra mpizara nPerf dia maherin'ny 1400 mpizara manerantany miaraka amin'ny fantsom-pifandraisana mihoatra ny 5 Tb / s.
Ny resaky ny mpanao gazety momba anay
Ahoana ny fomba fisedran'ny nPerf
Ny fitsapana bitrate dia miankina amin'ny fisintomana rakitra mimari-droa miaraka amina fifandraisana marobe miaraka mba hahavoky ny fifandraisanao mandritra ny segondra vitsy. Azontsika refesina tsara ny bitrate. Ny taha tampony dia mifanaraka amin'ny salan'isa 30% amin'ny santionany avo indrindra (50% rehefa mampakatra). Ny salan'isa antonony dia isaina aorian'ny nanilika ny 5% amin'ny ambany indrindra ary 5% amin'ny santionany avo indrindra.
Ny fitsapana "latence" dia atao im-polo. Izahay dia manao kajy ny salanisa farany kely sy salanisa, ary koa ny sandan'ny jitter (fiovana lehibe indrindra eo anelanelan'ny santionany).
Maody TCP / HTTP
Amin'ny fandaharana tsy miova, ny motera nPerf dia mampiasa maody TCP izay mahomby kokoa satria mampiasa sockets mivantana tsy mandalo ny navigateur. Raha hampiasa maody TCP dia mila miditra amin'ny serivisy lavitra ianao amin'ny TCP Port 8080. Raha tsy misy ny maody TCP (voasakana ny port 8080), dia atao amin'ny maody HTTP ny fitsapana. Amin'ity tranga ity dia mandalo amin'ny navigateur ny fangatahana. Mety tsara ho an'ny bitrates hatramin'ny 100 Mb / s, fa mihoatra izany, mahatratra ny fetrany ity fomba ity.
Hanome banky angona ho an'ny fiarahamonina
Ianao no miantoka ny fisian'ny nPerf. Ny fampiasanao ny rindrambaiko, na dia ny tsy andoavambola aza, dia efa fandraisanao anjara amin'ny tetikasa. Ny fisedrana ataonao no manatevina ny lahatahiry nPerf ary koa manampy amin'ny fanatsarana ny tolotra sy ny fitaovana nPerf.
Hanome solosaina mpizara
Sysadmin ianao, mpanentana tranonkala na mpamatsy Internet? nPerf dia afaka mampiditra server ho anao manokana! Arakaraka ny anomezan'ny mpizara anay no mahatsara ny valin-pitsapana. Ho an'ny ISP, azontsika atao ny manohana ny fikirakirana sy ny fitantanana ireo mpizara. Mifandraisa aminay.
Inona avy ireo tahirin-kevitra izay nangonin'ny nPerf?
Ny application nPerf dia manangona statistika ara-jeografika fotsiny. Tsy misy angona manokana nangonina . Ny angona nangonina dia ampiasaina hanondroana ireo tambajotran'ny mpandraharaha. Ny data rehetra nangonina dia lasa fananan'ny nPerf SAS. Ny angona nangonina dia toy izao: ara-jeografika, fampahalalana amin'ny tambajotra, karazana fitaovana sy modely, version ny systeme, fandrefesana ny fitsapana.
Ahoana no fomba fampiasana ireo rakitra?
Atambatra ny angona mba havoakan'ny tenanay. Izy ireo koa dia hampiasaina hanehoana ny statistikan'ny sarintany amin'ny tranokalanay. Raha afindra amin'ny orinasa na toerana hafa izy ireo amin'ny lafiny ara-barotra, dia hatao tsy mitonona anarana tanteraka (data obfuscation IP) ireo data ireo.
Mifandraisa aminay !
Te handinika amin'ny antsipiriany ireo angona ve ianao? Afaka manome angon-drakitra, tsy fantatra anarana ary feno ho an'ny faritra jeografika voafaritra izahay. Mifandraisa aminay azahoanao vinanina manokana.
Ny serivisy nPerf rehetra dia fananana manokana an'ny orinasa nPerf SAS. Zo rehetra voatokana.
FISEDRANA NPERF - FITSIPIKA FAMPIASANA NY TOLOTRA
Zava-dehibe: Vakio tsara ity fanomezan-dalana ity alohan'ny hampiasa ny tolotra omenay.
Politika momba ny tsiambaratelo sy Cookie - 30/11/18